नेजासँग बाबुराम, ‘तपाईलाई नेपाल नचाहिएको हुनसक्छ, तर नेपाललाई तपाईहरुको जरुरत छ’ – Everest Times News
नेजासँग बाबुराम, ‘तपाईलाई नेपाल नचाहिएको हुनसक्छ, तर नेपाललाई तपाईहरुको जरुरत छ’
२०७५ आश्विन २, मंगलवार ०७:३७
ड्यालस । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले यतिखेर नेपाललाई विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सीप, स्रोत र क्षमताको जरुरत भएको बताएका छन् ।
ड्यालसमा शनिवार बिहान नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ (नेजा)ले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा डा. भट्टराईले भने, ‘बरु तपाइहरूलाई नेपाल नचाहिएको हुनसक्छ, नेपाललाई भने तपाईहरुको जरुरी छ ।’ उनले नेपालको आर्थिक विकासका निम्ति प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको आवश्यकता रहेको बताए ।
भट्टराईले प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपालमा ल्याउनका लागि वातावरण मिलाउने दायित्व आफ्नो पनि भएको उल्लेख गरे । एनआरएनको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता मुलुकको लागि पनि हितकर हुने उल्लेख गर्दै राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिनुपर्नेमा आफ्नो सहमति रहेको उनले बताए ।
‘एनआरएनहरूलाई राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकता दिँदा हुन्छ भन्ने मेरो धारणा हो, तर अहिले ऐन ड्राफ्ट आउँदा राजनीतिक अधिकार हटाइएको रहेछ । नागरिकता दिँदा हुन्छ, नागरिकताको निरन्तरताले देशलाई लाभै हुन्छ,’ भट्टराईले भने ।
देशलाई विकास गर्नका लागि पुँजीको आयातमा अवरोध गर्नु नहुने धारणा उनको थियो । ‘बाहिरबाट आउने लगानीमा स्रोतको खोजी गरेर किन अनावश्यक चक्करमा पर्नु ?’ उनले प्रश्न गरे ।
बाहिरबाट नेपालमा लैजाँदा कानुनको पालना भएको रहेनछ भने त्यसलाई नियमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू भएको उल्लेख गर्दै नेपाल भित्रिनेमा अनावश्यक चक्करमा पर्नु आवश्यक नभएको समेत उनले बताए ।
बाबुरामले यसपटकको आफ्नो अमेरिका भ्रमण यहाँ रहेका नेपाली समुदायका सदस्यहरू र अमेरिकाकै विभिन्न क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरूसँग भेटेर कुरा र अनुभव सुन्ने उद्देश्य रहेको जानकारी दिए ।
देश कसरी समृद्ध कसरी हुनसक्छ भन्ने एक प्रश्नमा भट्टराईले नेपालको भू–बनोट र भू–राजनीति मुख्य बाधक रहेको उल्लेख गरे । श्रम शक्ति निर्यात गरेर र विदेशी सामान उपभोग गरेर मात्र देश नबन्ने उनको भनाई थियो । ‘श्रमलाई हेर्ने जुन प्रकारको सोचाई नेपाली समाजमा रह्यो त्यसले पनि विकासमा समस्या बढाएको छ,’ भने ।
निर्वाह मुखी अर्थतन्त्रमा आधारित भएर संसारका कुनै पनि देश अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै भट्टराराईले नेपालको तुलनात्मक लाभका क्षेत्र के हुन् भन्ने कुरालाई पहिल्याएर गुणात्मक ढंगले अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कि जान्नुपर्छ कि छाड्नुपर्छ
पूर्व प्रमं भट्टराईले व्यवस्था बदलिए पनि सोच नबदलिएका कारण समस्या जस्ताको तस्तै रहेको उल्लेख गरे । उनले व्यवस्थाको बखान गरेर मात्र नहुने र कि जान्नुपर्ने कि त सक्षम युवापुस्तालाई छाड्दिनुपर्ने बताए ।
‘अहिले सरकारको पहिलो ६ महिना त्यति आशाजनक र सकारात्मक देखिएको छैन । तर, ६ महिना नै अन्त्य नै भने होइन,’ उनले भने । डा. भट्टराईले केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकालाई काम गर्ने पर्याप्त अवसर रहेको उल्लेख गर्दै काम गर्नका लागि शुभकामना दिए।
बाघ बुढो र स्याल तन्नेरी
भट्टराईले आफ्नो मन्तव्यको केही समय अमेरिकाको गुणगान र समृद्धिको समेत चर्चा गरे ।
‘संसारमा अमेरिका एक शताब्दीदेखि विकासको केन्द्रबिन्दु भएको छ । पछिल्लो समय दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरू विकासको गतिमा अघि बढे पनि अमेरिकालाई बुढो बाघको संज्ञा दिए ।
‘जतिसुकै बुढो भए पनि बाघ भनेको बाघै हो, तन्नेरी स्यालले उछिन्न सक्दैन,’ उनले भने ।
उनले अहिले नेपाललाई दुई अर्थतन्त्रबीचको पुल बन्नुपर्ने र त्यसबाट फाइदा लिनुपर्ने बताए ।
माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा १७ हजार सर्वसाधारण मारिएको प्रश्नको उत्तर दिँदै भट्टराईले बलिदानीको क्रममा त्यस्तो हुने रहेछ भने । त्यसलाई समीक्षा गरेर अब मलहम पट्टी लगाउनेतिर लाग्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
पीडितलाई मलहम पट्टी लगाउनेतिर सबै लाग्नुपर्छ । ‘पीडितलाई उचित संरक्षण र हेरविचार गर्ने्तिर लाग्नुपर्छ,’ उनले भने ।
नेजाका कार्यवाहक अध्यक्ष विकासराज न्यौपानेको सभापतित्व तथा सचिव सुरज भण्डारीको सञ्चालनमा भएको अन्तरक्रियामा पूर्बमन्त्री तथा भट्टराई पत्नी हिसिला यमीले संसारमा ध्वस्त नभैकन कुनै पनि संरचना पुरै नबनेको उल्लेख गर्दै युद्धको समयमा एक्साभेटर जलाएको सन्दर्भ निकालेकी थिइन् ।
त्यस अवसरमा डा. भट्टराईले अहिलेको व्यवस्थाले देशमा स्थिरता नदिने दाबी गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा नगएसम्म स्थिरता नआउने बताए ।
एक महिने लामो अमेरिका अध्ययन भ्रमणमा आएका डा. भट्टराईले अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा रहेका नेपाली समुदायसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।